MV switchgear chinoumba vagadziri & vanotengesa | China MV switchgear chinoumba fekitori
Iyo yekuvhara inopinga inoshandisa wave ceramic seyakavhara ganda, iyo yekudyidzana zvinhu ndeyeCuCr alloy, iyo longitudinal magineti munda kapu dhizaini, ine yakakwira kutyora chinzvimbo, yakakwira yekuisa chikamu, yakasimba arc kudzimisa kugona, hupenyu hwakareba, diki saizi uye nyore kugadzirisa, Hapana kuputika. njodzi, hapana kusvibiswa, pasi ruzha uye zvichingodaro. Main technical technical parameter Kukosha Rated voltage 12kV Rated parizvino 630A Rated frequency 50Hz Rated pfupi-yenguva simba frequency frequency kumira voltage (1 min) 42k ...
Indoor SF6 ye switchgear 10KV 630A Gasi Insulated Mutoro Break Break Chinja LBS Indoor Isolating switch
Iko kushandiswa kwemamiriro ekunze: 1. Kukwidza: ≤2000m; Kudengenyeka kwenyika kwakasimba: kusapfuura masere. Tembiricha yemhepo: haina kukwira kupfuura + 40 ℃, isiri pasi pe -30 ℃. Ivhareji yezuva nezuva yehumhu hunyoro kwete inopfuura 90%, pamwedzi paavhareji isingapfuuri 90%. 3. Iyo yekuisa saiti ine kazhinji uye ine chisimba vibration haina kukodzera iyo yekuisa saiti ine mvura mhute, gasi, kemikari inoparadza deposition, munyu pfapfaidzo, guruva uye tsvina, moto uye kuputika njodzi izvo zviri pachena zvinokanganisa iyo perfo ...
Inouya yekushandisa mashandiro egesi insulated switchgear
SF6 Yakasungirwa switchgear Chishongedzo: Chinyorwa / mota: A, yakaoma kupindirana / B, yakapfava inopindirana technical Paramende. kumhanya m / s 3-6 Kuvhara avhareji yekumhanyisa m / s 4-6 Tri-chikamu bounce yakajairwa m / s ≤2 Matatu-chikamu kuburitsa angle ° 88 ° Mechanical hupenyu Nguva 10000 Simba rekushandisa N -110 Dhirowa:
12kV 630A loadbreak chinja
Technical Parameter 12KV Zvemukati Unit Parameter Rated Voltage KV 12 Rated frequency HZ 50 Rated mari A 630 Rated pfupi pfupi wedunhu kumira cu 『rent KA 20/25 Rated yepamusoro kusimudzira yazvino KA 63 Rated pfupi pfupi wedunhu nguva s Nguva 10000 Yakavhurika triphase inopesana ms ≤2 Kuvhara triphase yakasarudzika ms ≤2 Kuvhura avhareji yekumhanyisa mis 3-6 Kuvhara avhareji yekumhanyisa m / s 4-6 Mhepo inoshanda nhanho yekumanikidza kutyorwa: 22KV -28 ...
SF6 Yakadzivirirwa Mutoro Break Break
Ongororo Mutoro chinja rudzi rwe switchgear ine yakapusa arc yekudzimisa mudziyo. Inoshandisa SF6 gasi seyakagadziriswa uye arc yekudzimisa svikiro. Inogona kushandiswa sekuvhara uye kutyora mutoro izvozvi uye kuwandisa kwazvino. Inogona zvakare kushandiswa sekuvhara uye kutyora isina-mutoro. Mitsetse, isina-mutoro ma transformer uye capacitor mabhangi, nezvimwewo, ese matatu-chinzvimbo mutoro ma switch ne on, off uye grounding mabasa ari nyore muchimiro uye anodhura. Pamusoro pehupenyu hwakareba, yakasimba kutyora fo ...